Nzira Nomwe dzekugadzirisa Multiboot ine Windows 8 uye Linux | Kubva kuLinux
Nzira nomwe dzekugadzirisa multiboot neWindows 8 neLinux
Charlie-Brown | | Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Gigabyte bhodhi UEFI
Mazuva mashoma apfuura shamwari yakanaka yaive ichinetseka nebhuku rayo nyowani (izvo sezvakatarisirwa zvakauya nazvo UEFI uye Windows 8 pre-yakaiswa) kuyedza kuisa Arch mu 'dual boot' pasina kubudirira. Ndichangobvisa iwo maWindows partitions uye nekuisa chete Arch, Ndawana chinyorwa mune imwe yemasaiti angu andinofarira, iyo inotsanangura nzira nomwe dzakasiyana dzekugadzirisa multiboot pane Windows 7 masisitimu.
Pakurayirwa neshamwari iyi, iyo yakagamuchira ruzivo nguva yapera, ndakafunga kushandura chinyorwa chose kuti chiwanikwe kune wese munhu, kuitira kuti avo vasingakwanise kuiverenga nerurimi rwayo rwekutanga vawane rairo yake, zvisinei, senguva dzose ini ndinokurudzira kune vese vane mukana, enda wakananga kunzvimbo yekutanga iyo ichagara iine hupfumi kupfuura chero shanduro.
Semashoko ekutanga, chinyorwa chiri kubvunzwa ndicho chekupedzisira pane akateedzana e3 pachinhu chimwe chete, chakaburitswa nemunyori mune yake Blog munzvimbo ZDnet.com, iyo yandinokurudzira kuverenga kuitira avo vanoda kupinda mune yakadzama nezvenyaya iyi. Pamusoro pemunyori weizvozvo, zita rake ndi JA Watson uye ane resume inoyevedza yaanotsanangura seizvi: “Ndakatanga kushanda neyatinoti 'macomputer eanalogog' mukuchengetedza ndege neUnited States Air Force muna 1970. Mushure mekupedza basa rangu remauto nekudzoka Kuyunivhesiti, ndakaziviswa kune microprocessors uye muchina mutauro wechirongwa paIntel 4040 processors.Shure kwaizvozvo ndakashandawo, ndikamisikidza uye kuronga zvigadzirwa kubva kuDigital Equipment Corporation PDP-8, PDP-11 (/ 45 uye / 70) uye minicomputer VAX. Ini ndaive nechekuita nefungu rekutanga reUnix-based microcomputer, mukutanga kwema80. Ndanga ndichishanda mukugadzira software, kushanda, kuisa uye kutsigira kubva ipapo.
Izvo zvakati, pasina kumwe kunonoka, heino kududzirwa kwechinyorwa chiri kubvunzwa, icho chandinosimbisa, zvese zvinokodzera ndezvemunyori wepakutanga uye chero zvikanganiso zvingangoitika ndezvekugadzira kwangu ndega.
Chikamu chakanaka chemashoko mune yangu ichangoburwa posvo yekuisa Fedora pane yangu nyowani laptop yaive mupfungwa yekuti "pachinzvimbo chekutiudza izvo zvisingashande, ndokumbira utipe ruzivo rudiki nezve sarudzo dzatinofanira ita basa racho ".
Iri izano rakanaka, uye ndinofara kuritevedzera. Kana zvese zvatinoita kugara takagunun'una nezve iyo vaviri bhutsu Linux pane masisitimu UEFIIsu tiri mukana wekuodza moyo vamwe vanhu kuti varege kuzviedza, uye chokwadi ndechekuti pane sarudzo dzinoshanda pasina huwandu hwesimba rekuedza.
Kutanga, zvakadaro, ndiri kuzodzokorora chimwe chinhu chandambotaura kakawanda zvisati zvaitika. Imwe neimwe firmware yekumisikidza UEFI zvakasiyana - uye kwete kungosiyana zvishoma, chero chiri.
Vamwe vanoshanda mushe mushe nekuiswa kweLinux, ivo vaviri bhutsu zvakatsetseka kunze kwebhokisi. Zvimwe zvinonetsa, hazvifungidzike, uye zvinotsamwisa nekusanzwisisika kwavo uye zvinoita kunge vari munzira yavo yekudzivirira Linux kubva kubhoot. Saka kana iwe uchida kuita mbiri bhutsu Linux neWindows, edza kutsvaga tsananguro yakanyorwa nemunhu ane imwecheteyo system yauri kushandisa, kana zvirinani sisitimu kubva kumugadziri mumwe chete.
Ok, saka ndedzipi mikana?
1. Isa iyo Linux GRUB boot loader
Zvakanaka, yekutanga uye zvechokwadi yakapusa kana ichishanda nemazvo, kuisa bootloader GRUB Linux sechinhu chakasarudzika bhutsu chinhu, uye uine kutonga kweviri-bhutsu neWindows.
Kuti uite izvi, hongu, iwe unofanirwa kuve nekuparadzirwa kweLinux kunoenderana ne UEFI - iwo andakaedza uye andinogona kupupura kuva vhura, Fedora, Linux mint y Ubuntu, asi kune vamwe uye kune zvimwe zvinouya munguva pfupi iri kutevera.
Kana iwe uine kugovera kweLinux inotsigira yakachengeteka bhuti UEFI, haufanire kunyange kuchinja marongero ekumisikidza UEFIkunyangwe vanhu vazhinji vachizosarudza kuregedza Yakachengeteka Boot zvakadaro.
Paunenge uchiisa kugovera kweLinux kunotsigira UEFI, kana zvese zvikaita sezvazvinofanira kuita uye iyo firmware kumisikidzwa UEFI zvinoshanda zvakanaka uye haugone "reboot" yakaipa (chimwe chinhu chandakaona chichiitika kazhinji), saka kudzorerazve mushure mekumisikidza kuzadza kunokutorera iwe GRUB, uye iwe uchave unokwanisa kusarudza pakati peLinux (default) kana Windows 8 kuti ubhure mairi.
Panguva iyoyo unenge wave wakasununguka pamba - asi ramba uchifunga kuti ini ndakazvionera (uye pachezvangu ndega) masystem ayo pane imwe nguva gare gare, kamwe kamwe gadzirisazve Windows bhuti marongero pasina chikonzero chakati. Kana izvi zvikaitika, iwe unofanirwa kufunga kushandisa imwe yedzimwe nzira dzakatsanangurwa pazasi, sezvo chiitiko changu chave chekuti izvi hazviitike kamwe chete.
2. Shandisa iyo BIOS bhatani sarudza kiyi
Chechipiri mukana ndechekuti iwe sarudza kugoverwa kweLinux kunoenderana ne UEFI, kuti kuiswa kwacho kwaitwa kwazvo, asi kana iwe uchitangazve ini ndinomuka neWindows pachinzvimbo cheLinux. Izvi zvinogona kutyisa, asi izvo hazvisi izvo zvakaoma kushanda nazvo.
Chinhu chakakosha kurangarira ndechekuti kuiswa kweLinux kwakazviwedzera pachayo kune yekutanga runyorwa - iwe unongofanirwa kukwanisa kusvika kune iyo runyorwa kubhoot.
Nzira iri nyore yekuita izvi ndeye kushandisa iyo BIOS sarudzo Sarudzo yeBoot, iyo inoshandiswa nekudzvanya yakakosha kiyi panguva yesimba-on kana kutangazve maitiro. Iyo 'yakakosha kiyi' inosiyana pakati pehurongwa, ini ndaona kupunyuka, F9 y F12 inoshandiswa pane mamwe masystem angu, uye ndine chokwadi kuti kune mamwe.
Kuimanikidza kuchakanganisa maitiro eWindows boot uye iwe unowana runyorwa rweanowanikwa masisitimu anoshanda - pamwe Windows 8 neLinux. Ini pachangu handina hanya neiyi sarudzo nekuti ini handifarire kupinda mu 'rush' nemaitiro ebhutsu kuti ndive nechokwadi chekuti ndarova bhatani sarudza kiyi munguva, uye kana ndikatsauswa kana kunonoka zvikuru ndinofanira kuenda nzira yese. nzira kuburikidza neWindows boot uye kungo reboot nekukasira kuti udzokere kubhoot kusarudza menyu.
Asi izvi zvinoita sekunge hazvina basa kune vanhu vazhinji, uye zvirokwazvo iri sarudzo inoda kushomeka kwekutamba uye kunetsekana neakashata BIOS marongero. Imwe nzira iyo izvi zvingaitwe zvishoma kuve nyore kuenda mukugadzika kweBIOS uye sarudza kunonoka kwekutanga, mazhinji masisitimu anotendera iwe kumisikidza 5-30 kunonoka kwechipiri pamberi peWindows chaizvo bhutsu, iyo inokupa iwe Iyo inopa yakawanda yakawanda nguva yekudzvanya iyo yemashiripiti kiyi.
3. Gonesa 'Legacy Boot'
Iyo yechitatu "yakapusa" mukana ndeye kugonesa 'Nhaka Bhutsu'muzvirongwa zveBIOS uye ingo hanya nezvese chinhu nezve UEFI.
Iyi haisi iyo sarudzo yandinosarudza ini pachangu, pamwe nekuti ini ndakaoma musoro pamwe nekuti, sekutsanangurirwa kwandakaitwa naAdam Williamson imwe nguva yapfuura, pane zvimwe zvinobatsira kubhoti. UEFI. Asi zvirokwazvo sarudzo inoshanda, uye zvine hungwaru maererano nekutora Linux kuiswa uye kubhowa, inogona kunge iri mhinduro iri nyore kwazvo.
Dambudziko rega randakaona nesarudzo iyi nderekuti mamwe masisitimu anoita kuti zviome kugonesa 'Nhaka Bhutsu', Zvimwe nekuti sarudzo yacho yakavanzwa museti yeBIOS, kana nekuti unofanirwa kuseta password yeBIOS isati yaita kuti uchinje. Ndanzwa kuti panogona kunge paine mamwe masisitimu asinga verenge 'Nhaka Bhutsu'kwete zvachose, asi handisati ndamboona imwe yakadai.
Chero zvazvingaitika, kusarudza iyi nzira hakuite chete kuti zvinhu zvive nyore zvakanyanya kune mbiri boot setup uye setup, asi zvakare inokutendera iwe kuti uise chero chero kugoverwa kweLinux iwe kwaunoda, zvisinei nekuenderana UEFI.
Ini pachangu ndakashandisa iyi sarudzo kumisikidza isiri-Linux migove UEFI, se SolydXK, PCLinuxOS y Linux Mint Debian Shanduro mukugadzirisa kwakawanda-bhutsu pamwe nekumwe kuenderana kweUFI kugovera. Saka ini ndinogona kudzokera kumashure ndoremadza Nhaka Bhutsu, uye ingoshandisa iyo GRUB inoenderana ne UEFI kubhoot Linux isina kutsigirwa.
Zvina. Edza kushandisa Windows bootloader
Mukana wechina unofanirwa kuve wekushandisa iyo Windows boot loader yeLinux mbiri boot. Ini ndinoti zvinofanirwa kudaro, nekuti vanhu vanoramba vachitumira makomendi anoti 'ingoshandisa EasyBCD kuimisa ", kana kutoti" shandisa bcdedit'Asi edza nepandinogona napo, handikwanise kuzviita kuti zvishande.
Ini ndakanyora nezve izvi gore kana zvakapfuura apo ini ndaive neyangu yekutanga system UEFI, uye ini ndakafungidzira panguva iyoyo kuti dambudziko raingova iro EasyBCD yakanga isina kunyatsogadziriswa kuti itsungirire kutanga UEFI, asi ikozvino ndaedza zvakare, ine yazvino vhezheni ye EasyBCD izvo zvandaigona kuwana kubva pawebhusaiti ye NeoSmart uye zvakadaro haukwanise kuwana Linux kubhutsu zvachose.
Ikozvino ndinogona kunge ndakanyanya kubatikana kuti nditsvage, asi kana mumwe munhu achizopinda ndokuisa chirevo achiti "zvinoshanda zvakanaka" saka ndokumbirawo uve wakagadzirira kunyatsotaura, uye upe zvakanyatsorongeka zvezvawakaita zviitise kuti zvishande. Nekuti ini ndakaedza zvese zvandinogona kufunga nezvazvo, uye zvisinei nezvandinoita, chinhu choga chandinowana kana ndichiedza kubhucha chero kuisirwa kweLinux ndeye "Windows yakatadza kubhoot" meseji
Ini ndatsvagawo webhu kuti ndiwane rumwe ruzivo, uye chete mienzaniso yekongiri yandinogona kuwana ndevaya vakakundikana nenzira imwechete seni. Ini ndinogona kuwana yakawanda nzvimbo inoti «EasyBCD works ", uye" shandisa EasyBCD ye multiboot Windows 8, 7, Vista, XP, MacOS uye Linux ", asi kwete HERE iyo inonyatsoti" takaita izvi neWindows 8 UEFI uye Linux, yakashanda, uye izvi ndizvo zvaunofanirwa kuita ».
Zvandakaita ndizvo zvinotevera. Ini ndakadownloader ndikaisa NyoreBCD 2.2 pane maviri Windows 8 masystem UEFI zvakasiyana (iyo ichangobva kuwanikwa HP Compaq uye yangu Acer Aspire Imwe 725). Pandakazomhanya EasyBCD (semutungamiriri zveshuwa) ndakashamisika kuti runyorwa rweanoshanda masisitimu akaonekwa ekugadzirisa kwako bhuti. Ini ndoziva iyo Windows bootloader yanga isati yazviona kana kupa kubhowa chero chinhu chisiri Windows 8. Zvakanditorera miniti kuti ndione kuti izvo zvakange zvakanyorwa ndizvo zvese zvaive muBIOS boot rondedzero.
Izvo chaizvo ndizvo zvaizopihwa kana ndikashandisa bhoot kusarudza sarudzo, sezvatsanangurwa pamusoro, asi kana ndikarega Windows boot kazhinji pakanga pasina chiratidzo cheava vamwe. Kunyangwe ndikaisa kunonoka kwechipiri makumi matatu paWindows kutanga, uchishandisa bcdedit o EasyBCD, yaizomira ichingonyora Windows 8. Saka sei EasyBCD Icho chakanyora zvimwe zvese here? Ini handina kunzwisisa, asi ini ndaitarisira kuti chingave chiratidzo chakanaka, icho EasyBCDZvirinani ini ndakawana dzimwe sarudzo, uye zvese zvandaifanira kuita izvozvi kwaive kuzviwedzera kune zvakajairwa Windows bootloader menyu.
Ndakaedza kuita izvozvo, kutanga ndichingomaka chimwe chekuparadzirwa kweLinux sechinhu chekutanga chebhutsu. EasyBCD rega ndiite izvozvo pasina kunyunyuta, asi pandakadzorerazve ndakaona kuti yakadzoka neWindows chaipo. Bah !.
Saka ndakaedza kushandisa "Wedzera" sarudzo mu EasyBCD, uye ini ndikamupa ruzivo rwese rwechimwe chezvikamu zveLinux. Panguva ino kana pandakatanga patsva zvakaratidza sarudzo yeLinux mune boot runyorwa, asi pandakaedza kubhuya yakandipa iyo meseji "Windows Boot Yakundikana". Ndakasheedzera pakadhini computer kuti yanga isiri kuyedza kutanga Windows, saka ingatadza sei, asi izvo hazvina kubatsirawo.
Ipapo ndakaona kuti zvandaive ndichinyatso simisa EasyBCD kwaive kuedza kubhoira chinhu chinonzi /NST/neogrub.efi (kana chimwe chakadai, ini handina zita chairo mumusoro mangu izvozvi, uye ndiri kurwara ne EasyBCD uye Windows, saka handisi kuzotarisazve).
Saka ndakaedza kuisa akawanda mabhuti mafaira ane zita iro - pakutanga ini ndakaedza iyo grubx64.efi mufananidzo kubva kune imwe yekuparadzirwa kweLinux, ndobva ndaedza kuteedzera iyo boot block (yekutanga 512 byte) kubva ku disk uye / kana system yeLinux mafaera. , sekuda kwazvinofanira kuitwa kuitira kuita bhutsu neWindows XP neLinux, uye ipapo ndakapererwa ndokungoisa Linux kernel pasi pezita iro. Ehe, hapana kana mumwe wavo akashanda.
Ini ndakazopedzisira ndafunga, zvichibva pane zvandakaona uye nekushaikwa kwenyaya dzekubudirira kana chaiko gadziriso ruzivo pawebhu, izvo EasyBCD hazvibatsiri kugadzira bootable Windows / Linux mbiri-bhuti UEFI chakagoneswa. Izvo zvinogona kuitisa kana ichigoneswa Nhaka Bhutsu, uye wozoimisa nenzira chaiyo yaiitwa muWindows XP, asi kana uchizoita izvozvo saka ingoshandisa nzira yetatu pamusoro uye unozvichengetera wega dambudziko.
Mushure mekurwa ne EasyBCD Kwenguva yakareba, uye pakupedzisira ndikakanda mapfumo pasi, ndakafunga kupa bcdedit utility kuyedza, inova yakajairwa Windows nzira yerudzi urwu rwekugadzirisa. Ini ndinonyatsoziva chirongwa ichi, ndambochishandisa kumisikidza mbiri-bhutsu neWindows XP, saka ini ndanga ndisiri kunyatsodzungaira zvisina kunaka murima.
Asi zvekare, zvisinei nezvandaedza, hazviite bhuti. Ini ndakakwanisa kuwana chinhu cheLinux chakawedzerwa kuWindows bootloader menyu, uye ini ndaigona kumisikidza zvese zvakasiyana zvinhu sechinhu chebhutsu, asi hapana chimwe chazvo chakashanda. Chekupedzisira, kungozviratidza kwandiri kuti ini ndanga ndisiri kungoita chimwe chinhu chisina kunaka (kana benzi), ini ndakaisa chinhu chebhutsu kune imwe yeLinux yekuedza kuve Windows 8 uye yakabhururuka ipapo ipapo. Grrrr!
Saka mhedziso yangu kubva pane zvese izvi ndeyekuti, chimwe chezvikonzero chikuru nei EasyBCD haina basa mukugadzira Linux mbiri bhutsu, hazvigoneke kushandisa Windows 8 bootloader kubhoja Linux ne boot UEFI chakagoneswa. Zvekare, zvinogona kuitika neLegacy Boot inogoneswa, asi ini handina basa nazvo izvozvi kuti ndizive.
Kana iwe uchiziva kuti ini ndakanganisa pane izvi, uye iwe pachako ndakagadzirisa Windows 8 system kubhoja Linux uchishandisa iyo Windows bootloader, wobva wandiudza mune zvakataurwa, ndokumbirawo, ndapota taura zvakananga uye utaure kuti wakazviita sei, nekuti ndingafarire kuziva.
5. Isa bhootloader rakasiyana
Yechishanu multiboot sarudzo UEFI ndiko kuisa rakasiyana bootloader, senge REFInd rakanyorwa naRoderick W. Smith. Izvi zvine mukana wekugona kubhodha chero chinhu - Windows, Linux, MacOS - uye ine simba kwazvo uye inochinja-chinja mukutsvaga otomatiki izvo zvinogona kunge zviri padhisiki, uchizviratidza senge bhutsu yekusarudza runyorwa.
Nehurombo, chinhu chega chisingagadzirise ndeye "isingashande / isingatarisirwe setup yeBIOS" nyaya yakatsanangurwa pamusoro. Kana Windows kana bhuti maitiro, kana chimwewo chinhu chiri kukanganisa nemaitiro eBIOS uye ichikuchengetedza kubva mukumisikidza zvachose GRUB seye default bootloader, ipapo zvinenge zvichinyatso kudzivirira kuiswa kwe REFInd.
6. Edza imwe nzira yechinguvana
Sarudzo yechitanhatu haisi mhinduro chaiyo kuBIOS isingabatsiri / isingatarisirwe dambudziko rekugadzirisa, ingangoita yakaipa kwenguva pfupi yekushandira kwayo.
Inoshanduka, kuwedzera kune yakajairwa "bhaotisheni yekuteedzana" runyorwa mubhutsi kurongedzwa UEFIIko kune zvakare "inotevera bhutsu" sarudzo, iyo inotsanangura imwe-nguva bhutsu kumisikidzwa.
Izvi zvinowanzo null, saka sisitimu inotevera bhatani kuteedzana runyorwa, asi kana rikaiswa, iyo sisitimu ichaedza kubhowa chinhu icho kutanga, uye zvakare zviri pachena kuti yakaiswa kuitira kuti bhuti rinotevera ridzokere mukushandisa kwekusarongeka bhuti kuteedzana runyorwa.
Iyo "inotevera bhutsu" kumisikidzwa inogona kugadziriswa kubva kuLinux uchishandisa efibootmgr -n XXXX, uko XXXX iri nhamba yechinhu chinyorwa, kuti uwane iyo yekuisa (nhamba) yeLinux, ingoshandisa efibootmgr isina sarudzo (kana efibootmgr -v kana iwe uchida kuona zvese zvakajeka) - Iyo nhamba ichave chimwe chinhu senge 0001 kana 0002 kazhinji.
Iyi "inotevera bhutsu" sarudzo inogona kushandurwa kuita semi-zvachose basa nekuwedzera iyo efibootmgr yekuraira kuLinux boot script, saka pese pese Linux bhutsu yaizogadziriswazve saka yaizotanga Linux zvakare munguva inotevera. kamwe. Handina kutaura kuti kwaitonhorera, kana kutsvinda, kana kutonaka, asi zvinoshanda, nekuti ini ndaedza.
7. Cheat iyo default boot maitiro
Chekupedzisira, yechinomwe sarudzo ndeye "kubiridzira" iyo default boot maitiro nekuisa iyo shim.efi Linux mufananidzo (kana grubx64.efi kana iwe ukadzima Yakachengeteka Boot) iko kunowanikwa Windows Boot Manager.
Pane masystem andakaedza, izvi zviri pachikamu chebhutsu subotnji (kazhinji / dev / sda2 paLinux, yakaiswa se / boot / efi), pasi pezita /EFI/Microsoft/Boot/Bootmgfw.efi. Ndakave nekubudirira mukuita izvi, asi ini ndinokuyambira kuti mamwe masisitimu (kunyanya HP Compaq) ane hukasha nezvekutarisa uye kumisazve gadziriso yebhoti UEFI nekutadza ivo dzimwe nguva vanoona kuti Bootmgfw.efi hachisi chaicho chirongwa "chepakutanga" chakaiswa, uye vanowana kopi yepakutanga vobva vaidzorera munzvimbo yayo, nokudaro vachibvisa hunyengeri hwekunyepedzera. Iwe unogona kufungidzira kushatirisa nekushungurudza iko kana izvi zvikaitika ...
Saka ipapo unayo. Sarudzo nomwe dzakasiyana dzekugadzirisa multiboot ine Windows 8 neLinux.
Ini ndinofunga pane zvimwe zvandisina kumbofunga nezvazvo, kana zvandisiri kurangarira izvozvi, asi izvi ndizvo zvandinofunga zviri pachena.
Ndakavaedza vese pane imwe nguva kana imwe. Iyo yakanakisa uye zvirokwazvo iri nyore ndeyekutanga, iwe unongofanirwa kuisa uye kubhowa GRUB, kana ichishanda pane yako system. Ini zvakare ndinoziva kuti vamwe vanhu vanopika kuti yechipiri sarudzo yakwana, nekungodzvanya Sarudza Boot, uye kuti ivo vanofunga kuti ndiri kuva simbe uye kusindimara nekusashandisa iyo iyoyo.
Kunze kweaya maviri, zvingangotora kuzvipira, kudzidza, uye kuyedza uye kukanganisa kuti vamwe vashande (mamwe andisati ndawana kuzoshanda). Asi mukufamba kwenguva, kana iwe wakatsunga kuita mbiri bhutsu Linux neWindows, iwe unofanirwa kugona kuzviita.
Zvakanaka, parizvino kududzirwa kwechinyorwa chepakutanga, ndinovimba chinobatsira avo vane dambudziko rakafanana ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Dzidziso / Mabhuku / Matipi » Nzira nomwe dzekugadzirisa multiboot neWindows 8 neLinux
Ndine urombo kutaura pamusoro pechimwe chinhu chisiri chepakati dingindira, asi ndeipi theme yaunoshandisa? Ini ndaifarira uye zvakanyanya kupfuura chero chinhu cheeruvara rweorenji rwemakona
Lol .. Iyo haisi OS, ndeye UEFI yegigabyte bhodhi.
Chaizvoizvo. Icho chinongedzo cheEFI
Yup ... sevashandi pamwe navo isaac uye eVeR vanoti, iwo mufananidzo weiyo UEFI interface yeGigabyte mamaboard.
Yakanaka chinyorwa, ini ndatoisa bookmark iyo yeramangwana.
Ndatenda nekumira ne ...
Mhoro, kunze kwekuda kuziva.
Seizvo munyori wekutanga akataura kuti inoyambira pamusoro pekuremadza uefi nekuti iwe une zvinoshanda zvinoshanda, pane chero munhu anoziva zvaari?
Mune mawonero angu (VERY munhu nenzira), UEFI mhinduro kudambudziko rakange risipo; Ini ndiri mumwe weavo vanofunga kuti kumwe kumisikidzwa kweMicrosoft (imwezve), kune vagadziri vezvigadzirwa kuti vabatsire kushandiswa kwezvigadzirwa zvavo uye zviite kuti zviomere makwikwi uye sezvinei, gadzira chimiro chekumisikidza chavo OS (semunhu chero upi zvake anowana muchina neEFI neWindows 8 pre-yakaiswa anogona kuona). Zvisinei, ndinodzokorora, ndiwo maonero angu chaiwo, saka ndinokurudzira kuti utsvage nekukurumidza paSan Google nemazita eEFI + uye iwe uchagamuchira zvinongedzo kune ruzivo rwakakwana kuti iwe ugone kuumba yako maonero.
Ah! uye ndinokutendai zvikuru nekumira nekupindura ...
ok ini ndichatarisa ipapo, asi mumwe chete mumwe mubvunzo panhau iyi, zvinorevei kuti nhaka yenhaka?
Haisi iyo yakafanana UEFI sekuchengetedzwa kwekuwedzera, imwe ichibva kuIntel uye imwe yacho kubva kuMS. UEFI chimwe chinhu senge IPv6, inouya kugadzirisa matambudziko mazhinji akagadzirwa pamusoro pemakumi emakore. Uchishandisa GPT inokunda iyo MBR inogumira zvese muhukuru uye huwandu hwezvikamu zvina pa diski. Iyo inoshandawo mu "pure" 4-bit mode, kusiyana neBIOS, iyo ichiri 64-bit. Ini pachangu, nguva dzandinofanira kushandisa multiboot ini ndaishandisa clover EFI (inotangawo OSX), inodzivirira iyo OS nekuverenga maforodha ari mune yekutanga VFAT chikamu. Uye kana masisitimu akasatangisa, shandisa inorarama USB kana CD, kuti uwane iyo yekutanga partition uye bvisa kana kufambisa maforodha.
Ehe, ndiri pachena kuti UEFI haina kufanana neKachengeteka Boot, zvinoitika ndezvekuti chimwe chinhu chaitove chakakosha (iyo "gadziriso" yeBIOS) kupa izvo zvinoshomeka zvakaunganidzwa nekufamba kwenguva uye kufambira mberi kwetekinoroji, iri Yakamonyoroka munzira, kunyanya nekuda kwesimba reMicrosoft, uye mushonga wacho wakazopedzisira waipa kupfuura chirwere.
Kune rimwe divi, zano raunopa rinoshanda zvakajeka, zvinoitika ndezvekuti kazhinji, kana ukaishandisa palaptop ine Windows 8 isati yaiswa, unorasikirwa newaranti yemidziyo nekuda kwekudzima kana kufamba maforodha echikamu akaiswa neiyo OS
Kuda kuziva nezve kurasikirwa warandi. Kana ini ndikagadzirisa saizi yeiyo windows partition pane nyowani laptop ndobva ndagadzira nyowani yekuisa linux, izvozvo zvinoitawo kuti ndirasikirwe newaptop waranti?
Chii chiri charly
Chekutanga pane ese akanaka post uye yechipiri ini ndaida kuona kana uchikwanisa kundibatsira.
Izvo zvinoitika ndezvekuti ini ndine Compaq 18 All-in-On uye inouya nema windows 8 kunze kwebhokisi uye izvo zvandinoda kuita iri mbiri bhutsu ine windows 7.
Uye ini ndakaita zvese nezve diski partition kuti ndikwanise kuisa windows pachikamu icho.
Zvakare watopinda BIOS uye bvisa yakachengeteka bhuti modhi uye gonesa iyo UEFI modhi.
Zvino dambudziko nderekuti kana ndichiisa windows ... muchikamu che "gadza zvasarudzo zvemberi" ini ndinosarudza chidimbu chediski chandinogadzira uye chinondiudza ichi "Windows haigone kuiswa pane iri diski. dhisiki rakasarudzwa rine GPT yekuparadzanisa maitiro »muchokwadi inondiudza nezvikamu zvese zvandinazvo.
Ini ndatsvaga mhinduro painternet asi ini ndinongowana mhinduro kune vanhu vanoda kungoisa windows7 uye kwete Dual boot nekuti nemamwe mhinduro ndaifanira kudzima zvikamu zvangu uye kunyangwe iyo wimdows 8 system kuti ndikwanise kuiisa uye ndizvo zvandisiri Ndinoda.
Ndingafarire kana iwe ukakwanisa kukweretesa ruoko
Mazhinji desktop mamaibhodhi anouya nenhaka bhuti inogoneswa.
Hongu, asi zvinhu zvinoomarara kana iri laptop ...
Andy Z akadaro
Ini ndinouya kuzotaura kuti zvirinani pana amai vangu AsRock iyo UEFI yakachengeteka bhutsu yakaremara, chimwe chinhu chakandibata
Pindura kuna Andy Z
Kana ini ndichingoda chete kuisa iyo inoshanda sisitimu yandinoda uye ikozvino, haifanire kunge yakadaro!
Izvo zvaive zvisati zvaitika, kunyanya iwe waifanira kumisikidza iyo BIOS kuti itange CD kana pendrive ine iyo ISO chifananidzo icho chaive nekuparadzira kwakagadzirira kuisa. Ndiyo imwezve nzira yekutiratidza kuti Windows makomputa anobva kuMicrosoft (kwete iyo inonzi inovatenga).
Pindura kuna Noctuido
Mhoroi, ndinokusiya vhidhiyo yekuti ungazviita sei, kunyange zvisina kunyatsotsanangurwa.
Nyaya iripo ndeyekuti iwe unoisa iyo cd ne ultraiso, titarise. Deu.
Chokwadi ndechekuti, mupiro wako wakanaka, ini ndanga ndichingo "reneging" nebhuku nyowani nyowani, iyo ine iyo gadziriso.
Ndatenda zvikuru nemupiro,
Haudi kukodzera nekuti pasina shanduro yako zvaisazosvika pamaoko edu.
Rubatsiro padanho rechinomwe.
Pane mumwe munhu angandiudza mafaira api andinofanira kuteedzera kana kutumidza zita rekuti ndiite nhanho "7 Pusa iyo default boot maitiro"
Ndakaedza asi ini ndakaita chakashata nekuti chakangobuda mu pront grub> uye handina kukwanisa kupinda muWindows kana Linux, ndinotenda kunaka kwandaive nemufananidzo weHD.
yakanakisa senguva dzose zvirimo kubva linux 🙂
Ini ndiri mumwe wevane rombo rakanaka iyo sarudzo 1 yakamushandira, ini ndakaisa ubuntu 14.04 64bit pane Asus n56vb uye chokwadi ndechekuti zvese zvakashanda zvakakwana.
kutanga kutaura ini ndinoita kune ino blog kuti chokwadi ndechekuti ndakazvitevedzera kwenguva yakareba
Ini ndaifanirwa kuprinta izvi kuti ndikwanise kuzviita pane yangu XD laptop
Kutanga, ndinokutendai zvikuru nekuda kwemazano aya muSpanish yakakwana.
Chechipiri, kabhuku kangu ndeye hp ine win8.1 pre-yakaiswa, ndakakwanisa kuisa Debian nezuro manheru uye handicharangarira nguva, ndinoziva kuti zvaive zvakanaka nekuti ndakadzorerwazve ndokupinda win8, pandakatangazve ndakakwanisa kupinda nekudzvanya F9 uye kusarudza sarudzo yeDebian yangu, iyo yakavhura Grub yangu uye nekudaro zvese zvakanaka. Saka mubvunzo wangu uri pakurudziro 1 pane "Isa Grub" Pane chikamu chipi chandinofanira kuisa grub kuti ive default bootloader? Inofanira kunge iri pachikamu apo iyo windo $ bootloader iri? .
Ongorora: Ini ndakaisirwa neEFI inogoneswa.
Kana iwe uchida iwe unogona zvakare kubvunza muforamu, vakomana vanogara vakagadzirira kubatsira http://foro.desdelinux.net/
Chekutanga pane zvese ndatenda nekuda kwechinyorwa ichi chinonakidza ruzivo rwese.
Kunyangwe ini ndisina ruzivo munyaya iyi, ndinonzwisisa mazwi uye ndinogona kutaura kuti nekuferefeta mumaforamu mazhinji nemablog, ndinogona kuwana zviri zviviri bhutsu zvinobudirira, nzira iri nyore kuzviita ndeyekupinda muBIOS zvakananga uye mune Kugadziriswa kweEUFI ndakaimisa uye ndikasiya yakanangana nekumisikidzwa kwehunhu Ndinoziva kuti ubuntu inotsigira uefi asi ndakaona kuti ichashanda, ipapo ini ndakaisa elementary os uye saka ndinogona kuenderera nekuisa OS's grub iyo yakaiswa ndeye 1.99 Zvakakodzera kutaura. kuti ini ndakaisa ubuntu mune imwechete windows chikamu chandinoita senge chisinganzwisisike sezvo ini ndinonzwisisa kuti chinoshanda muex.
Noe Interiano akadaro
Chokwadi ndechekuti ini ndinofunga sevakawanda kuti iko kumisikidzwa kweMicrosoft sezvo isingatibatsire zvachose, itori feat kuita kukwanisa kuisa Linux neWindows 8 pakombuta imwe chete.
Pindura Noa Interiano
Ini ndinoda rubatsiro pachikoro netbook, Ubuntu yakaiswa ine windows 8.1 asi kana ichitanga inongooneka uye kutanga, inotakura Ubuntu, mahunyanzvi anoratidza kuti Windows 8.1 yakaiswa uye iwe unoiona mune yakaoma disk zvikamu.
Mubvunzo wangu unogona kuve nawo pakutanga masystem maviri uye iwe sarudza iyo yaunoda kushanda nayo.
imwe nhungamiro yematanho ekutevera,
kuvonga kune vese
Kana iwe usiri kugadzirisa izvo kutarisa pano
pa internet pane zvakawanda zvinyorwa zvinotaura nezve grub marongero, default sarudzo, nguva, kumashure mufananidzo ...
Alfredo Marin akadaro
Mhoro mudiwa ndakaverenga chinyorwa uye chokwadi chinoratidzika kwandiri kunge chinonakidza ini handizive zvakawanda nezve masisitimu, asi ndine dambudziko, pakombuta yangu ndine windows 7 uye Fedora yakaiswa, ikozvino dambudziko nderekuti ini handikwanise kutanga mumamiriro akachengeteka mumawindo ini ndoda Unogona kunditsanangurira nenzira yakapfava zvandinofanira kuita kuti ndikwanise kuita basa iri, kwaziso nekutenda, ndinenge ndakamirira mhinduro yako ...
Pindura kuna Alfredo Marin
Hi Alfredo, ndinogona kunge ndakanganisa asi nzira yekupinda mumamiriro akachengeteka ichiri mukati memahwindo bhutsu, saka nekukurumidza mushure mekusarudza iyo win7 yekupinda mugrub tanga kudzvanya F8 uye dzokorora masekondi maviri ega ega kuti iro hwindo renguva risingapfuure, izvi yakagara ichiitwa uye zvakare anoshanda masisitimu haafanire kukanganisa kutanga kweimwe.
Pakupedzisira zvandakaita kuisa mudiwa wangu Debian ndobva ndaisa chirongwa chemuchina, virtualbox, kwandaiisa win7 yemimwe mitambo 😀 Nenzira iyi ndinogara ndichitanga muLinux uye kana ndichida kutamba ndinovhura muchina chaiwo.
Ini ndanga ndichizvibvunza kana uchigona CHETE kuisa linux kubva kunhaka bhuti?
Yangu pc ndiyo imwe yenyaya dzaunotaura kuti haigamuchire siginecha yeEFI yechero OS kunze kwemawindo
Chinyorwa chakanaka. Kutenda neshanduro.
Pindura kuna Francisca
Mhoroi, mumwe munhu angandibatsire ini ndoda kubhurawuza kubva kuUSb uye pandinoita bhuti menyu iyo skrini inosviba uye gion inopenya uye haitangi uye ndinofunga imhaka yekuti ndinofanira kudzima uefi kubva kune bios asi haindibvumidze kuti ndiibvise uye handizive nei Ndine windows 7 angagona mumwe munhu kundibatsira
Mune bios (zvinoenderana nezvazviri), mune yangu zvirinani ndinoenda kuchikamu chekugadziriswa kwebhutsu, padyo pane chinhu chinonzi "Legacy Mode", unofanirwa kumisikidza iyo legacy modhi, saka iyo uefi maitiro ichaita kuremedzwa, mushure meizvozvo gadzira iyo odhiyo yebhoti yemamiriro enhaka kuti usiye USB senzira yekutanga, chengetedza shanduko uye buda. Bios yekomputa yangu inondiyambira kuti shanduko dzakaitwa muiyo bios dzinogona kukanganisa kuchengetedzwa kwemidziyo uye mamwe materu, saka zvinokumbira kuti unyore nhamba pane iyo keyboard iyo inokuisa iwe ipapo pachiratidziri, kana izvi zvaitwa system inotanga nenzira yenhaka (zvakajairika). Zvido.
Ini ndakada yako posvo, panguva yandisingazive yekuisa Linux, pachokwadi ndingadai ndaida kukwanisa kutanga Puppy Linux, ndichaenderera mberi ndichiongorora kuti ndione kana ndichiiwana, asi hapana mubvunzo kuti chinyorwa chako chakandibatsira kuti ndinzwisise uranda kwahwo isu tumira windows mashoma, zvakanaka kune vamwe, haandibate futi
Pindura kune eeyygg@gmail.com
Ini ndichangobva kuisa Windows 270 pane yeColombian Samsung NP7 muchina muefi modhi, ini ndaona kuti fekitori uefi iri kushanda, asi isina bhuti rakachengeteka, ini ndaonawo kuti ine sarudzo mune uefi bios, yekudzima! Masiginecha ese edhijitari (zvitupa zveefi) zvinouya nemidziyo uyezve pane mukana wekuwedzera nekutsiva iyo yainayo kubva kufekitori neWindows 8 kune chero siginicha yedigital yechero inoshanda system, saka ndinofungidzira kuti Samsung haigamuchire kuiswa yebhoti rakachengeteka…. kana haidi kuwira mukuganhurira mushandisi kuisa kusvika kumawindo XP …… nekuti iyi laptop inounza sarudzo yekumisa safeboot nechimwe chinhu chisinganzwisisike chinonzi csm os ……
Kutenda nekutumira…. Sezvandinorangarira, ndakaedza kuisa windows 7 muefi mode pane acer laptop uye iyo laptop haina kuunza safeboot sarudzo ……. saka hapana chaigona kuitwa kunze kwekudzoreredza neiyo fekitori system… ..
Mhoroi ... inonakidza chinyorwa ... asi ngatisvikei kune iyo poindi, sezvo ini ndasvika kune rako peji, nekuti ini ndine dambudziko nekugadzirisa uefi pane yangu Chinese piritsi pipo w4 ne win 8.1 pro…
Ini ndaida kuisa ubuntu pachikamu (chikamu chandisina kugadzira munzvimbo yaisanganisira iyo windows yekudzorera sisitimu inogara) iyo yaive isina matambudziko, asi pandakadzorerazve, rakasviba dema screen rakaonekwa ne efi shell vhezheni 2.31 mauri iwe chete yekuisa mirairo ... ini ndapinda exit, (iwo wega murairo unoshanda) uye ndadzokera kune bios ...
Pamberi pekumisikidzwa ubuntu, ini ndanga ndatora iyo yakachengeteka modhi uefi, ndaiisa munzira yenhaka, iyo yandinoita kubva kunyaradzo semutungamiriri ... chinhu chinoshamisira ndechekuti izvozvi windows maneja modhi haioneke senge bhuti sarudzo mune iyo bios yekumisikidza… chete uefi.
kubva ku bios ndakaipa chiuru kumisikidzwa asi hapana chinondishandira, kunyangwe ne f kiyi dzeUSB keyboard yakabatana netablet ... haina kuona usb pendrive, sd ndangariro, hapana zvekunze zviri pachena ... chete iyo keyboard ...
ikozvino mibvunzo yangu ndeiyi inotevera ... ingaita w8.1 yekudzosa pendrive basa iro kubva kune usb memory rinoshanda semubati maneja? kunyangwe ichiratidzika kunge isiri kuona chero chinhu kubva kuUSB?
Pane chero nzira yekudzosera iyo piritsi kubva pc, ine chirongwa chebhutsu kana kunze kuisa madhiraivha, kana bios? Ndakaona pane yepamutemo peji rehwendefa kuti kune madhiraivha ekugadza zvirongwa kuburikidza nePC, asi sezviri pachena ndezve Android piritsi…. pachave neyakafanana nzira ye windows?
Pane mutemo here unoti kubva kuefi shell, unonditungamira kuti nditangezve windows, kana kumisazve piritsi zvachose, kana kundizivisa zvakare kune iyo windows yemahwindo?
Kana ini ndinongofanira kuitora kune nyanzvi?
ndatenda nemhinduro dzako pamberi ... kwaziso kubva kuChile!
Pindura kuna augus
Mhoro, zvinoita sekunge kana uchigadzira iyo pendrive neRUFUS unofanirwa kusarudza mhando yekuparadzanisa iwe unofanirwa kusarudza GPT yeEFI uye nenzira iyo iyo bios inozviziva ... Ndiri kuyedza .. kana zvikashanda, ndinokuudza SLDS kubva kuChile
Imwe sarudzo inogona ... fomati zvese nekuisa Windows7 uyezve Ubuntu?
Juan Acuña akadaro
Parizvino ndichaedza zvese, ndinokutendai zvikuru nekukuchengetai, uye munguva pfupi ndinokupai mhinduro .. kana ndiinadzo. isu tiri mune imwecheteyo kodzero ..
Pindura Juan Acuña
Iyo chaiyo nzira yekuita Windows mbiri boot basa neEasyBCD inotsanangurwa pane ino webhusaiti:
Izvo ndezve kugadzira chikamu cheGrub pazasi windows uye kuti chishande, kana linux yaiswa, iwe unofanirwa kushandisa EasyBCD 2.2
Kuiswa kweLinux uku kunokutendera kuti ubvise zvachose pasina kukanganisa Windows kutanga mune zvishoma.
Haber Antonio, mune chikamu chipi chedzidziso iwe chauri kubatanidza ndiyo EasyBSD kumisikidzwa? Nekuti ini ndakaverenga iyo dzidziso yese uye hapana chinhu chine hukama neichi.
Ndine misoro yakaringana ine Win8-Debian mbiri bhutsu, kuti nditange kushanya (pamwe ichi ndicho chega chinhu chawakaseka) uye kuverenga mapeji kumirira imwe yeruzivo, uye pakupedzisira kuwana imwe isingakoshe
Chinyorwa ichi hachina ruzivo nezve maitiro anoitwa, iwe unongotaura nezvazvo, senge ndinoti, kudya, unogona kusarudza pakati pe pizza kana pasita, asi haina kukuudza mabikirwo epizza kana kugadzirira pasita nemuto waunoda.
Pindura kune lea
Ndine Asrock H61M-VG3 uye ndine dambudziko iri, sezvo ini ndinonzwisisa zvishoma uye ndicho chiitiko changu chekutanga kuisa maviri anoshanda masystem. Yakauya neWindows 8 uye ini handina kukwanisa kuisa Windows XP pairi, kudzamara ndazviita nekugadzirisa chimwe chinhu muBIOS. Yakashanda zvakanaka, asi payakatangazve haina kundiratidza chero sarudzo yekusarudza pakati pe8 ne XP. Ini ndakaisa EasyBCD "Ndakaigadzirisa" uye hapana chimwe chakatanga. Yakati pane kukanganisa. Kuti iyo faira yaive isipo mu system32. Ndakaedza BONSE mamota andaigona kuwana pawebhu uye ini ndichiri kusakwanisa kuwana. Ini ndinotuka zuva randinotenga iri wed * zuva.
Pindura kuna EmmaFX
Chinyorwa chakanakisa kwazvo ini ndakadzidza zvakawanda uye sekufunga kwandaita nezvacho uye ndikasvika pamhedziso inyaya yekuvakwa, ini ndanga ndisingatombo zive neiyo OS kusvika rinenge mwedzi wapfuura uye ini ndawana dambudziko iri nevhiki yapfuura ndakawana hp isingabvumidze kuisa linux kugoverwa, usaedze chero chinhu nekuti haisi komputa yangu asi ndinofunga inofanirwa kukwanisa
Uine nyorebcd iwe unogona. Kwayedzwa paMachines 355 ine windows 10 zvichitevera iyi turorial rename http://es.ccm.net/faq/10661-realizar-un-multiboot-con-easybcd
Mhoroi, ini ndoda kuita mubvunzo, ini ndine mbiri bhutsu PC ine Windows 7 uye Ubuntu asi ini ndoda kuchinja Windows 7 kuWindows XP. Mubvunzo wangu ndewekuti maitiro acho anofanirwa kunge ari kuomesa nekuisa XP pane iyo Win7 partition? … Izvo zvakapusa kana pane chimwe chinhu?
Mhoroi, ini ndoda kuita mubvunzo, ini ndine windows 10 asi ini ndakaisa kali linux, asi ini ndakakanganwa kuita mbiri bhutsu, painotanga haina kutanga windows 10 kana isiri iyo kali linux, ini ndatoedza mawindo ekudzosa nzira , mumwe munhu aigona kubatsira?
Victor payta akadaro
Ndine dambudziko ndahwina 7 uye ndakaisa linux centos 7 mune chimwe chikamu asi aura aura ndinogadzirisa sei bhuti pakutanga kupinda shirikadzi 7
Pindura kuna victor payta
pandinoisa isingaremer OS kubva mahwindo 10 Zvingave here kuti ini ndinorasikirwa neakawanda ehunhu hwayo hwakajairwa?
EA Mujica D akadaro
Mushure memakore angangoita gumi uye isu tichiri zvakafanana neefi neWindows 10 kana pasina uefi pamushini zvinoti hazvigone kuiswa kana kutaura nezvematambudziko maviri bhutsu. Ndiri kuona kuti makambani anoenderera mberi nebasa ravo kudzivirira linux kubva pakuiswa pamakomputa avo. Iko vashandisi vanofanirwa kugadzira yakasarudzika makomputa asingatenderi maviri bhutsu. Uku kubvisa rusununguko rwako rwekusarudza zvekuita nekombuta yako uye vagadziri vanofanirwa kusungirwa kuisa ngano "Inowirirana chete neWindows kwete mbiri bhutsu" uchiri kushanda kune vanorodha bhutsu kumisazve rusununguko rweMuridzi wemidziyo. iyo yekutenga uye haina kupihwa kupi.
Pindura kune EA Mújica D
Iyo Ubuntu Global Menyu inofa, iyo menyu inodzoserwa kumahwindo mune inotevera Ubuntu sehupenyu hwese
Yakanakisa Linuxero Desktop: Kukadzi 2014